फेसवाश होइन यस्ता कुराहरुले धुनुहोस् अनुहार, पाइनुहुनेछ चमक ! – Krazy NepaL
April 13, 2021 748
साबुन र फेसवासमा अत्यधिक मात्रामा रासायनिक तत्व हुने भएकाले यसले छालाको तेललाई सोस्छ र छालालाई रुखो बनाउछ। त्यसैले अनुहार सफा गर्ने नाममा यस्ता रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग भन्दा पनि घरेलु उपाय अपनाउनु जरुरी छ। यी घरेलु उपायले अनुहारमा चमक त ल्याउछ नै यसका अलवा छाला संग सम्बन्धित हरेक समस्याको समाधान गर्ने गर्दछ।
अनुहारको सफाईका लागि साबुनको ठाउँमा निम्न घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ।
Prevधोकेबाज हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, कतै तपाई नि त पर्नुभएन ?
Nextबिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारणहरु